A female politician’s guide towards knowledge and empowerment
This ‘Female Politician’s Guide towards Knowledge and Empowerment’ is especially designed forafemale politician to gain political knowledge and skills to help her have confidence in herself and the work she is doing, to understand the important elements of politics, and identify the barriers as to female political participation. On the other hand, this guide seeks to help female politicians to be happy with their choice to work as politicians and find tools of encouragement in their political path.
အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးသမားများအတွက် ဗဟုသုတကြွယ်ဝရေး၊ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ရေးလမ်းညွှန်
အခု လမ်းညွှန်စာအုပ်ဟာ အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးသမားတွေအတွက် မိမိတို့ လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းမှာ တတက်တအားဖြစ်စေတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိလာပြီး မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဉီးဖြစ်လာစေဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပြီးတော့ ဒီစာအုပ်ကို ထုတ်ဝေလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ အမျိုးသမီးတွေ ပိုမိုပါဝင်လာနိုင်စေဖို့ ကူညီတဲ့အနေနဲ့ အခုပို့စ်ကို share ပေးနိုင်ပါတယ်။
STEP Democracy facilitates discussions between political parties and Facebook on hate speech
Nowadays, social media is getting more and more popular asameans for people to connect and share information. Among the various social media platforms used in Myanmar, Facebook is the most popular with one study siting that as of February 2019 there were 21,765,000 Facebook users.
နိုင်ငံရေးပါတီများအတွက် လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာနှင့် အမုန်းစကားပေါ် ဆွေးနွေးပွဲ STEP Democracy မှ စီစဉ်ပေး
ယနေ့ခေတ်အချိန်အခါတွင် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာသည် လူထုအကြားတွင် အဆက်အသွယ်ပြုရန်နှင့် သတင်းအချက်အလက်များ မျှဝေရန်အတွက် အသုံးပြုကြသည့် အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သုံးစွဲနေကြသည့် လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာများထဲတွင် ဖေ့စ်ဘုတ်သည် လူသုံးများ လူသိများသည့် စာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စာရင်းများအရ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးစွဲသူပေါင်း ၂၁၇၆၅၀၀၀ ရှိကြောင်းသိရသည်။
ရွေးကောက်ခံ စည်ပင်သာယာ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးများ၏ ကွန်ယက်သစ်တစ်ခုကို STEP Democracy - ရှေ့သို့မြန်မာမှ ထောက်ပံ့ကူညီပေး
ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာရွေးကောက်ပွဲကို အသက်ပြည့်သူတိုင်း မဲပေးခွင့်ရသူပုံစံဖြင့် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ၂၀၁၉ခုနှစ် မတ်လတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဉီးရေ ၂၃၃ ဉီးရှိခဲ့ရာတွင် အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၄၄ဉီးလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာ အဆင့်ဆင့်ကော်မတီများတွင် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် စုစုပေါင်း ၇၉ဉီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့်အထဲတွင် အမျိုးသမီး ၂၆ဉီးသည်လည်း ပါဝင်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
STEP Democracy supportsanew network of elected women
For the first time, the Yangon City Development Committee Election of March 2019 was held under universal suffrage. In this election, out of the 233 candidates running for election 44 were women. From the 79 township committee members elected in these historic elections, 26 are women who are now working to serve their communities across the city.
Press Release: Political parties and Facebook discuss ways to confront misinformation and hate speech on social media ahead of Myanmar’s 2020 elections
Political parties and Facebook discuss ways to confront misinformation and hate speech on social media ahead of Myanmar’s 2020 elections
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမုန်းစကားများနှင့် သတင်းအချက်အလက် အမှားများကို တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများအကြောင်း နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ကုမ္ပဏီတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမုန်းစကားများနှင့် သတင်းအချက်အလက် အမှားများကို တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများအကြောင်း နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ကုမ္ပဏီတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
What does democracy mean to you? - Myanmar Actress Daw Swe Zin Htike
What does democracy mean to you? - Yangon City Mayor U Maung Maung Soe
Interview: The methodology of asking us questions and allowing us to discuss and talk in front of others gave me confidence
Scholar Institute, through the EU funded STEP Democracy programme, implemented the programme’s newest curriculum on civic education ‘Nurturing the Leaders of Future Generations’ throughout August and September, 2019 at Htet Myat Htun and Shwe Pin private schools in Rakine State’s capital Sittwe. During the training we hadachance to interview students about the course and what they have learned. Su Wai Phyo shares her thoughts with us below.
အင်တာဗျူး - ပြည်သူ့နီတိဘာသာရပ်ကို သင်ကြားရတာ အရမ်းကြိုက်ပါတယ်၊ ဒီဘာသာရပ်ကို သင်တဲ့အချိန်မှာ သတ္တိရှိလာတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်
STEP Democracy - ရှေ့သို့မြန်မာ အစီအစဉ်၏ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်သော ပြုစုပျိုးထောင် မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင် ပြည်သူ့နီတိ သင်ခန်းစာများကို စကော်လာ အင်စတီကျု အဖွဲ့မှ သြဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလတို့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ရှိ ထက်မြက်ထွန်းနှင့် ရွှေပင် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတို့၌ စတင် အကောင်အထည်ဖော် သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းများကို တက်ရောက်ခဲ့သည့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအနေဖြင့် သင်တန်းမှ မည်သည့်အရာများကို သင်ယူခဲ့ကြပြီး သင်ခန်းစာများအပေါ် သူတို့၏ အမြင်များကို မေးမြန်းခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ ပထမဆုံးအနေနှင့် ကျောင်းသူ မဆုဝေဖြိုးမှ သူမ၏ အတွေ့အကြုံ ထင်မြင်ယူဆချက်များကို ပြောပြထားပါသည်။